တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝန် H.E. Mr. Sanjay Mitra အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေး အတွင်းဝန်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar ၊ အိန္ဒိယ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ အိန္ဒိယစစ်သံမှူးနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ တက် ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များတိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ယခင်ကနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး(၅)ရပ်နှင့်အညီ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ် စပ်ဒေသလုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား သက်ဆိုင်ရာ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ကဏ္ဍများအလိုက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေး အတှငျးဝနျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Saurabh Kumar ၊ အိန်ဒိယ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ အိန်ဒိယစဈသံမှူးနှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနမှတာဝနျရှိသူမြား တကျ ရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-အိန်ဒိယနှဈနိုငျငံသညျ အိမျနီးခငျြးကောငျးနိုငျငံမြား ဖွဈပွီး နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မြားတိုးတကျကောငျးမှနျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ယခငျကနှဈနိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား သဘောတူညီခကျြဖွဈသညျ့ ငွိမျးခမျြးစှာအတူ ယှဉျတှဲနထေိုငျရေးမူကွီး(၅)ရပျနှငျ့အညီ ရပျတညျဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျ စပျဒသေလုံခွုံရေး၊ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား သကျဆိုငျရာ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ကဏ်ဍမြားအလိုကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေားနှငျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။